နေအိမ်/Uncategorized/"" "အသုံးပြုရလွယ်ကူ" ဖဲကြိုး Shredder
သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးမှလက်ဆောင်ပူဇော်လိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျအရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံသေချာစေချင်. သင့်ရဲ့ဆုကြေးဇူးကိုမြှင့်တင်ရန်သောအရေးအပါဆုံးအချက်တစ်ခုမှာထုပ်ပိုးဖြစ်ပါတယ်. လက်ဆောင်များကိုအထူးများမှာ, မသက်ဆိုင်သင်သည်ထိုသူတို့တင်ပြနေသောအကြောင်းပြချက်များ. ဒီအတိုင်းဆုကြေးဇူးကိုကိုအကောင်းဆုံးပစ္စည်းများ အသုံးပြု. မေတ္တာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အတူပတ်ရစ်ထားရမည်ဆိုလိုသည်.
သင့်ရဲ့ဆုကြေးဇူးကိုပေးကမ်းခြင်းအတွေ့အကြုံမှတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းဖို့, သင်သည်လက်ျာ tools တွေလိုအပ်ပါတယ်. ဖဲကြိုး Shredder သုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွယ်ကူသောတစ်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းနှင့်စွယ်စုံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်, သင့်လက်ဆောင်ထုပ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်နိုင်စွမ်း.
Easy-To-အသုံးပြုမှုကိုဖဲကြိုး Shredder အကြောင်း
ဤသည်ဖဲကြိုး Shredder တစ် mini ကိုဆံပင်ဖြောင့်ရန်အသှငျအပွငျအလားတူသောဖဲကြိုးဖျက်ဆီးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဒါဟာကိရိယာ၏အထက်ပိုင်းအပေါ်သတ္တုသွားများသို့မဟုတ်တခါတရံတွင်ပလပ်စတစ်အံသွားနဲ့ဖဲကြိုးဖျက်ဆီးဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါသွားတို့သည်ဖဲကြိုးဖြတ်အောက်ခြေမှတစ်ဦးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်တစ်ပြိုင်နက်ဖဲကြိုး curls. ဒီ tool ကိုဖျက်စီးနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်နှင့်ဆံပင်ကောက်ကောက်ဖဲကြိုး. ယင်း၏အသုံးပြုမှုကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ပေါ့ပါးခြင်းနှင့်ခရီးဆောင်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. ရိုးရှင်းစွာအပြားအကြားမှာရှိတဲ့ဖဲကြိုးအားမရခြင်းနှင့်တစ်ခုတည်းဆွဲထဲမှာ shredding နေဖြင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်. အဆိုပါဖဲကြိုး mini ကို tool ကိုသင်တစ်ဦးလေးကိုသို့မဟုတ်အခြားအလှဆင်စေသီးခြားစီဖဲကြိုးဖြတ်တောက်နှင့် shredding ၏စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အချိန်ကယ်တင်.
Honstar ဖဲကြိုးလေး Co. ,, Ltd. ,, (http://www.ribbon-accessories.com) အဆိုပါချမှတ်ခြင်းအားဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်ဖဲကြိုးအမျိုးမျိုးတို့ကိုတင်ပို့ထားပြီးတစ်ဦးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, နှစ်ပေါင်းများစွာလက်ဖြစ်ဆက်ဆံမှုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ.
အဆိုပါအံ့သြဖွယ်ဖဲကြိုး Shredder ကုမ္ပဏီ၏ပထမတန်းစားထုတ်ကုန်နှင့်လေးမော်ဒယ်များလာ. ဤအမော်ဒယ်များနှင့်အတူ, သင်ဖဲကြိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေယူနိုင်ပါတယ်, ရောင်းချသူသို့မဟုတ်ဆုကြေးဇူးကို Decorators ၏အကူအညီမပါဘဲ. အဆိုပါထုတ်ကုန်သင်ဖန်တီးမှုဖြစ်နှင့်သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမသွားအောင်ခွင့်ပြု, တစ်ဦးဿုံပတ်ရစ်သောဆုကြေးဇူးအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ.
အဆိုပါ device ကိုဖဲကြိုး curler ပါဝင်သည်ရာအများအပြားအမည်များအားဖြင့်လူသိများသည်, ဖဲကြိုးရှုး, ဖဲကြိုး mini ကိုအလျားလိုက်အပေါက် tool ကို, ဖဲကြိုး mini ကိုအလျားလိုက်အပေါက်စက်, ဖဲကြိုးဖျက်ဆီးနဲ့ curler, ဖဲကြိုးဖျက်ဆီး tool ကို, သို့မဟုတ်ဖဲကြိုး splitter.
အားလုံးဖဲကြိုးဖျက်ဆီး COLORS Order စေနိုင်ပါတယ်.
ဒီ tool အများအပြားအသုံးပြုမှုရှိပြီးမည်သည့်အဖြစ်အပျက်သို့မဟုတ်ရာသီအတွက်သင့်လျော်သည်. ဒါဟာယာဉ်စီမံကိန်းအတွက်မဆိုအလှဆင်ဖန်တီးခြင်းအတွက်သင်ကကူညီနိုင်သည်, မင်္ဂလာဆောင်, ခရစ္စမတ်, နောက် ... ပြီးတော့.
ကျနော်တို့က high-quality နဲ့လှပသော Poly ဖဲကြိုးနှင့်အတူလူတိုင်းပေးရန်ကျူးလွန်နေကြသည်, ဆုကြေးဇူးကိုလေးနှင့်ထုပ်စိတ်ကူးများ.
Poly ဖဲကြိုးနှင့်ဆုကြေးဇူးကိုအများဆုံးအရည်အချင်းပြည့်မီတရုတ်မိတ်ဖက်ဘဏ်ဍာငန်းရှင်များအဖြစ်, Honstar အများအပြား Fortune မဂ္ဂဇင်းအစေခံရန်ဆက်လက် 500 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအုပ်စုများ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များပညာပေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတှေ့အကွုံမှတဆင့်မဆိုဒုက္ခ averting အားဖြင့်ကူညီ.
ဘေးဖယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အံ့သြဖွယ်ဖဲကြိုးဖျက်ဆီး tool ကိုမှသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်:
Poly ဖဲကြိုး, ဖဲကြိုး spool, Crimped Curling ဖဲကြိုး, ဖဲကြိုး kegs (ဖဲကြိုးဥ), Poly Deco ကွက်ဖဲကြိုး, ငှက်တွန်းလှန် Scare ဖဲကြိုးတိပ်ခွေ, ပူဖောင်းရေခဲပြင်ဒိုးပစ်ဖဲကြိုး, multi-လိုင်းများဖဲကြိုး spool, Pom အဘိဓါန် Pom ဆွဲကိုင်သောလေးများ, လိပ်ပြာဆွဲကိုင်သောလေးများ, ယက်ဖဲကြိုးလေးကို, pre-ချည်ထားကိုင်သောလေးများ, ကြယ်ပွင့်လေး, Fancy လေး, curly လေး, ဧရာဖဲကြိုး & ကားတစ်စီးလေး, polyester ရုပ်ရှင်လိပ် & ပေရုပ်ရှင် (ဖဲကြိုး Roll), စက္ကူ Raffia, အီစတာမြက်, ခြုံစာတမ်းများ, အချည်းနှီးသောဖဲကြိုး spool, ဖဲကြိုးပန်းကုံး & Tinsel, နှင့် Sequins.
အားဖြင့် ချားလ်စ်က Wong|နိုဝင်ဘာလ 1st, 2018|Uncategorized|ဟာ Off comments အပေါ် "" "အသုံးပြုရလွယ်ကူ" ဖဲကြိုး Shredder